Mini Mbike Adventure 2018 : hisy mpifaninana avy any Frantsa handray anjara | NewsMada
Mini Mbike Adventure 2018 : hisy mpifaninana avy any Frantsa handray anjara
Par Taratra sur 08/05/2018
Hiditra amin’ny andiany fahatelo ny fifaninanana hazakazaka am-bisikileta «Mini mbike adventure». Hiavaka izy ity satria hisy mpifaninana avy any ampita handray anjara sy hifampitana amin’ny Malagasy.
Hotanterahina ny asabotsy 12 sy ny alahady 13 mey ho avy izao, ny andiany fahatelo amin’ny hazakazaka am-bisikileta “Mini mbike adventure”. Toy ny mahazatra, hazakazaka natokana ho an’ny bisikileta fitondra amin’ny lalan-dratsy “VTT” izy ity ary fifaninanana isan-tarika, izany hoe : ahitana mpifaninana roa ao anaty ekipa iray. Na izany aza, ekena ny fandraisana anjaran’olon-tokana.
Ankoatra ireo mpihazakazaka malagasy, hisy mpifaninana avy any Frantsa sy La Réunion ary avy any Maorisy, handray anjara. Nasiam-panovana ity andiany ity satria nahena ho dingana roa raha dimy izany, tamin’ireo andiany roa voalohany. Hanohana ny “Mini mbike adventure 2018”ny XXL sy ny Eau vive izay ho rano fisotron’ireo mpifaninana.
Hiara-dalana amin’ny fanatanjahantena, amin’ity ny fandehanana an-tongotra, ka hisy hatrany ny fitsidihana ireo toeram-pitsangantsanganana sy ny valan-javaboahary handalovan’ny fifaninanana. “Mba hakana aina sy hialana voly hiatrehana ny fiaingana ny ampitson’io (alahady 13 mey), ny anton’izany”, hoy i Stéphane Lacas.
Hanatontosa ny halavirana 12 km, ireo mpandeha am-bisikileta raha 47 km ny an’ireo mpandeha an-tongotra, ny asabotsy 12 may. Hifamadika indray izany ny alahady 13 mey ka 47 km ny an’ny bisikileta raha 37 km ny an’ny mpandeha an-tongotra.
Hotolorana bisikileta VTT hiaka farany sy kojakoja miaraka aminy, ireo mpandresy. Tanjon’ny mpikarakara ny fampakarana ny lentan’ny fifaninanana, indrindra ho an’ireo mpihazakazaka malagasy.